June 5, 2019 Cele Love ဗဟုသုတများ 0
အိပ်ချိန်ပြည့်ဝမှုဆိုတာ လူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်နေပါတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေး တစ်နေ့အိပ်ချိန် အနည်းဆုံး ၇နာရီ ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အိပ်ချိန်ပြည့်ဝမှ ကျန်းမာမယ်။ တစ်နေ့တာလုံး လန်းဆန်းတက်ကြွပြီး ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို လုပ်ကိုင်နေမယ်။ အားအင်ပြည့်ဝနေမှာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် …။
ဒါဆို တချို့လူတွေက အိပ်ချိန်မှန်ရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ မနက်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာ ပင်ပန်းပြီး အိပ်ရေးမ၀သလို၊ ခေါင်းမူးနေသလို၊ မောပြီး အားမရှိသလို လန်းလန်းဆန်းဆန်း မဖြစ်တာ ဘာကြောင့်လဲ တွေးမိပါလား။ ဒီလို အိပ်ချိန်မှန်ရဲ့သားနဲ့ အိပ်ရေးမ၀ ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် ဗဟုသုတ ဝေမျှပေးချင်ပါတယ် ….။
အိပ်ရေးမ၀သလို ခံစားနေရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ ….
တစ်နေ့ကို အိပ်ချိန် ၇-၈နာရီ ပြည့်အောင်လည်း အိပ်ထားတယ်။ မနက်အိပ်ရာနိုးလို့ မလန်းဆန်းဘူး၊ ခေါင်းမူးနေတယ်၊ အိပ်ရေးမ၀သလို ဖြစ်နေတာဟာ ဒီအချက်တွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ် နော် ……..
၁။ အိပ်ချိန်နဲ့ ၆နာရီအတွင်းမှာ ကဖင်းဓာတ်ပါဝင်တဲ့ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်တွေ သောက်မိတဲ့အခါ ညအိပ်ပျော်သွားခဲ့ရင်တောင် ဦးနှောက်က အလုပ်လုပ်နေရတဲ့အတွက် မနက်ခင်းမှာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေနိုင်ပါတယ် …။
၂။ ညအိပ်ခါနီး ၂နာရီအတွင်း သို့မဟုတ် ည ၈နာရီထက် နောက်ကျပြီး အစာစားတဲ့သူတွေမှာလည်း အစာအိမ်က အစာချေဖျက်နေရတဲ့အတွက် ညအိပ်မပျော်တာ ဖြစ်စေနိုင်သလို အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်သည့်တိုင်အောင် စိတ်မကြည်မလင်၊ ကိုယ်လက် မအီမသာ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ် …။
၃။ ညအမှောင်ထဲမှာ ဖုန်းအသုံးပြုတာ၊ ကွန်ပျူတာ၊ တီဗီနဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါ ဖန်သားပြင်ပေါ်က အလင်းတန်းတွေဟာ မျက်လုံးထဲကို တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်လာပြီး မျက်စိထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ညအိပ်ခါနီးမှ ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့သူ အများစုဟာ အိပ်ချိန် ၇နာရီ ပြည့်ဝခဲ့ရင်တောင် နိုးလာတဲ့အခါ အိပ်ရေးမ၀တဲ့ ခံစားချက်မျိုး၊ မျက်စိညောင်းကိုက်နေတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါ တယ် …။
၄။ ညအိပ်ချိန်နဲ့ နီးကပ်စွာ အရက်သောက်တဲ့အခါ အရက်ရှိန်ကြောင့် အိပ်ပျော်သွားပေမယ့် ကောင်းစွာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်သွားတာမျိုး မဖြစ်စေလို့ အပြည့်အ၀ အိပ်စက်မှု ရရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး …။
၅။ ရေသောက်တာဟာ မကောင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်မျိုး မဟုတ်ပေမယ့် ညအိပ်ခါနီးမှ အများကြီး သောက်လိုက်မိရင်တော့ ဆီးမကြာမကြာ ထသွားရတာကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ ကောင်းစွာ အိပ်စက်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် …။
၆။ အလုပ်ခွင်က စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ စိတ်ညစ်စရာ၊ စိတ်ပူပန်စရာတွေဟာ ခေါင်းထဲမှာ ပြည့်နေရင် ဘယ်လိုမှ ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အိပ်ပျော်သွားခဲ့ရင်တောင် စိတ်က ပူနေရတဲ့အတွက် မနက်ခင်းနိုးလာရင်လည်း စိတ်ရော ခန္ဓာပါ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေမှာပါ …။
ကောင်းစွာ အိပ်စက်အနားယူနိုင်စေဖို့ ဘာတွေ လုပ်သင့်လဲ ?
၁။ အိပ်ခါနီး ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ၊ ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုတာ ရှောင်ပေးပါ…။
၂။ အိပ်ရမယ့် အခန်းဟာ မှောင်ပြီး တိတ်ဆိတ်နေပါစေ …။
၃။ ကဖင်းဓာတ်ပါတဲ့ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ ဖျော်ရည်တွေကို မနက်ပိုင်းမှာ သောက်ပေးပါ …။
၄။ အရက်သောက်ပြီး အိပ်တဲ့ အကျင့်ကို ရှောင်ပေးပါ …။
၅။ အဆီများတဲ့ အစားအစာတွေ၊ ရင်ပြည့်စေမယ့် အစားအစာတွေကို ညအိပ်ခါနီး မစားသင့်ပါဘူး …။
၆။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပြီး အာဟာရမျှတတဲ့ စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံကို ကျင့်သုံးပေးပါ …။
၇။ လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်လုပ်ပေးပါ …။
၈။ သာယာငြိမ့်ညောင်းဖွယ် ရေစီးသံ၊ တီးလုံးသံတွေကို ဖွင့်ထားပေးပါ ….။
အိပ်ရေးမ၀တဲ့ ပြဿနာဟာ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ရှိလား ?
သိပ်ပြီး စိုးရိမ်စရာ ကိစ္စတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပေမယ့် အိပ်ရေးပျက်တာ များလာမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်ခွင်၊ တာဝန်တွေကို ထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ သေချာပြသကြည့်သင့်ပါတယ်။ အိပ်မပျော်ခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ၊ တခြား ငုပ်နေတဲ့ ရောဂါအခံတွေ ရှိ၊ မရှိ သေချာစစ်ဆေးကြည့်မှ ကိုယ့်ရဲ့ အိပ်ရေးမ၀သလို ခံစားနေရတဲ့ ပြဿနာကို အဖြေရှာနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော် …။ ။
အိပျခြိနျပွညျ့ဝမှုဆိုတာ လူတှရေဲ့ ကနျြးမာရေးအတှကျ အရေးကွီးတဲ့ အခနျးကဏ်ဍက ပါဝငျနပေါတယျ။ အသကျအရှယျမရှေး တဈနအေိ့ပျခြိနျ အနညျးဆုံး ရနာရီ ရှိဖို့ လိုအပျပါတယျ။ အိပျခြိနျပွညျ့ဝမှ ကနျြးမာမယျ။ တဈနတေ့ာလုံး လနျးဆနျးတကျကွှပွီး ကိုယျ့ရဲ့ နစေ့ဉျလုပျငနျးဆောငျတာတှကေို လုပျကိုငျနမေယျ။ အားအငျပွညျ့ဝနမှောပဲ ဖွဈပါ တယျ …။
ဒါဆို တခြို့လူတှကေ အိပျခြိနျမှနျရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ မနကျနိုးလာတဲ့အခြိနျမှာ ပငျပနျးပွီး အိပျရေးမဝသလို၊ ခေါငျးမူးနသေလို၊ မောပွီး အားမရှိသလို လနျးလနျးဆနျးဆနျး မဖွဈတာ ဘာကွောငျ့လဲ တှေးမိပါလား။ ဒီလို အိပျခြိနျမှနျရဲ့သားနဲ့ အိပျရေးမဝ ဖွဈနတေဲ့သူတှအေတှကျ ဗဟုသုတ ဝမြှေပေးခငျြပါတယျ ….။
အိပျရေးမဝသလို ခံစားနရေတဲ့ အကွောငျးရငျးတှေ ….
တဈနကေို့ အိပျခြိနျ ၇-၈နာရီ ပွညျ့အောငျလညျး အိပျထားတယျ။ မနကျအိပျရာနိုးလို့ မလနျးဆနျးဘူး၊ ခေါငျးမူးနတေယျ၊ အိပျရေးမဝသလို ဖွဈနတောဟာ ဒီအခကျြတှကွေောငျ့ ဖွဈနိုငျပါတယျ နျော ……..
၁။ အိပျခြိနျနဲ့ ၆နာရီအတှငျးမှာ ကဖငျးဓာတျပါဝငျတဲ့ ကျောဖီ၊ လကျဖကျရညျတှေ သောကျမိတဲ့အခါ ညအိပျပြျောသှားခဲ့ရငျတောငျ ဦးနှောကျက အလုပျလုပျနရေတဲ့အတှကျ မနကျခငျးမှာ ပငျပနျးနှမျးနယျနနေိုငျပါတယျ …။
၂။ ညအိပျခါနီး ၂နာရီအတှငျး သို့မဟုတျ ည ၈နာရီထကျ နောကျကပြွီး အစာစားတဲ့သူတှမှောလညျး အစာအိမျက အစာခဖြေကျြနရေတဲ့အတှကျ ညအိပျမပြျောတာ ဖွဈစနေိုငျသလို အိပျရေးဝအောငျ အိပျသညျ့တိုငျအောငျ စိတျမကွညျမလငျ၊ ကိုယျလကျ မအီမသာ ဖွဈနနေိုငျပါတယျ …။
၃။ ညအမှောငျထဲမှာ ဖုနျးအသုံးပွုတာ၊ ကှနျပြူတာ၊ တီဗီနဲ့ ရုပျရှငျကွညျ့တဲ့အခါ ဖနျသားပွငျပျေါက အလငျးတနျးတှဟော မကျြလုံးထဲကို တိုကျရိုကျဝငျရောကျလာပွီး မကျြစိထိခိုကျနိုငျပါတယျ။ ဒီလို ညအိပျခါနီးမှ ရုပျရှငျကွညျ့တဲ့သူ အမြားစုဟာ အိပျခြိနျ ရနာရီ ပွညျ့ဝခဲ့ရငျတောငျ နိုးလာတဲ့အခါ အိပျရေးမဝတဲ့ ခံစားခကျြမြိုး၊ မကျြစိညောငျးကိုကျနတောမြိုး ဖွဈတတျပါ တယျ …။
၄။ ညအိပျခြိနျနဲ့ နီးကပျစှာ အရကျသောကျတဲ့အခါ အရကျရှိနျကွောငျ့ အိပျပြျောသှားပမေယျ့ ကောငျးစှာ နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျ အိပျပြျောသှားတာမြိုး မဖွဈစလေို့ အပွညျ့အဝ အိပျစကျမှု ရရှိမှာ မဟုတျပါဘူး …။
၅။ ရသေောကျတာဟာ မကောငျးတဲ့ အလအေ့ကငျြ့မြိုး မဟုတျပမေယျ့ ညအိပျခါနီးမှ အမြားကွီး သောကျလိုကျမိရငျတော့ ဆီးမကွာမကွာ ထသှားရတာကွောငျ့ ကိုယျ့ရဲ့ ကောငျးစှာ အိပျစကျမှုကို ထိခိုကျစနေိုငျတာပဲ ဖွဈပါ တယျ …။
၆။ အလုပျခှငျက စိတျဖိစီးမှုတှေ၊ စိတျညဈစရာ၊ စိတျပူပနျစရာတှဟော ခေါငျးထဲမှာ ပွညျ့နရေငျ ဘယျလိုမှ ကောငျးကောငျးအိပျပြျောနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ အိပျပြျောသှားခဲ့ရငျတောငျ စိတျက ပူနရေတဲ့အတှကျ မနကျခငျးနိုးလာရငျလညျး စိတျရော ခန်ဓာပါ ပငျပနျးနှမျးနယျနမှောပါ …။
ကောငျးစှာ အိပျစကျအနားယူနိုငျစဖေို့ ဘာတှေ လုပျသငျ့လဲ ?
၁။ အိပျခါနီး ရုပျရှငျကွညျ့တာ၊ ဖုနျး၊ ကှနျပြူတာ အသုံးပွုတာ ရှောငျပေးပါ…။
၂။ အိပျရမယျ့ အခနျးဟာ မှောငျပွီး တိတျဆိတျနပေါစေ …။
၃။ ကဖငျးဓာတျပါတဲ့ ကျောဖီ၊ လကျဖကျရညျ၊ ဖြျောရညျတှကေို မနကျပိုငျးမှာ သောကျပေးပါ …။
၄။ အရကျသောကျပွီး အိပျတဲ့ အကငျြ့ကို ရှောငျပေးပါ …။
၅။ အဆီမြားတဲ့ အစားအစာတှေ၊ ရငျပွညျ့စမေယျ့ အစားအစာတှကေို ညအိပျခါနီး မစားသငျ့ပါဘူး …။
၆။ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျပွီး အာဟာရမြှတတဲ့ စားသောကျနထေိုငျမှုပုံစံကို ကငျြ့သုံးပေးပါ …။
၇။ လကေ့ငျြ့ခနျး ပုံမှနျလုပျပေးပါ …။
၈။ သာယာငွိမျ့ညောငျးဖှယျ ရစေီးသံ၊ တီးလုံးသံတှကေို ဖှငျ့ထားပေးပါ ….။
အိပျရေးမဝတဲ့ ပွဿနာဟာ စိုးရိမျဖှယျရာ ရှိလား ?
သိပျပွီး စိုးရိမျစရာ ကိစ်စတဈခုတော့ မဟုတျပမေယျ့ အိပျရေးပကျြတာ မြားလာမယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ အလုပျခှငျ၊ တာဝနျတှကေို ထိခိုကျလာမယျဆိုရငျတော့ ဆရာဝနျနဲ့ သခြောပွသကွညျ့သငျ့ပါတယျ။ အိပျမပြျောခွငျးကို ဖွဈစတေဲ့ အကွောငျးရငျးတှေ၊ တခွား ငုပျနတေဲ့ ရောဂါအခံတှေ ရှိ၊ မရှိ သခြောစဈဆေးကွညျ့မှ ကိုယျ့ရဲ့ အိပျရေးမဝသလို ခံစားနရေတဲ့ ပွဿနာကို အဖွရှောနိုငျမှာပဲ ဖွဈပါတယျနျော …။ ။